नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन फागुनमा कति सम्भव? , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन फागुनमा कति सम्भव?
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशको विषयलाई लिएर रस्साकस्सी सुरु भएको छ। आइतबार सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफलको एजेण्डामा महाधिवेशन परेपछि यसलाई महाधिवेशनलाई लिएर रस्साकस्सी सुरु भएको हो।
संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतरपक्षबीच महाधिवेशनको विषयमा कुरा मिलिरहेको छैन। यद्यपी संस्थापन इतर पक्षले चौधौँ महाधिवेशन सम्बन्धी एजेन्डा हुनु पर्ने अडान लिएपछि केन्द्र्रीय कार्यसमिति बैठकमा महाधिवेशनको एजेण्डाले प्रवेश पाएको हो।
२७ गते बस्ने बैठकमा पार्टी विधानको धारा ७२ (४) अनुसार पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसारको गठनपपछि १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने बारेमा छलफल हुने बताइएको छ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको नियमावली पारित गरेपछि विधानतह संरचना निर्माणको बाटो खुला हुनेछ। कांग्रेसको संशोधित विधानमा वडादेखि केन्द्रसम्म गरी आठवटा तह हुने व्यवस्था छ ।
तर, विधान पारित भएको पाँच महिना बित्न लागे पनि ७७ जिल्लामा मात्रै समिति छन्। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महाधिवेशनको एजेण्डाले प्रवेश पाएपनि अहिले संस्थापन पक्षसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेका कारण निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनेमा संस्थापन इतरपक्ष विश्वस्त छैन।
कांग्रेस विधानमा प्रत्येक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर विशेष परिस्थितिमा ६–६ महिना गरी एक वर्षसम्म कार्यसमितिको म्याद थप गर्न सक्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ।
वर्तमान सभापति देउवा आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गरी वर्तमान कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप गर्न चाहन्छन्। तर संस्थापन इतरपक्ष भने फागुनभित्रै १४ औं महाधिवेशन हुनुपर्ने अडानमा छ। संस्थापन इतरपक्षको दवाबपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महाधिवेशनको एजेण्डाले प्रवेश पाएको हो।
केही दिन अगाडि काग्रेस नेता जगदीश नरसिंह केसीको निवासमा भएको संस्थापन इतर पक्षको भेलाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट महाधिवेशनको मिति तोक्न दवाब दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि संस्थापन इतर पक्षले आइतबार सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेशनको एजेण्डलाई प्रवेश गराउन सफल भएको हो।
संस्थापन इतर पक्ष फागुनभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्ने पक्षमा छ भने संस्थापन पक्ष एक वर्ष म्याद थप गरेर जाने पक्षमा छ। वर्तमान कार्यसमिति बैठकमा सपभति शेरबहादुर देउवाको स्पष्ट बहुमत छ।
तर, संस्थापन इतर पक्षको दवाबलाई बेवास्ता गरेर जान सक्ने अवस्थामा भने देउवा छैन। पछिल्लो समय १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा देउवालाई सघाएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संस्थापन इतरपक्षमा छन्। अहिले वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, महामन्त्री डा. शशांक कोइराल, डा. शेखर कोइरालालगायतका नेता एकै ठाउँ उभिएका छन्।
यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनमा जाँदा संस्थापन इतर पक्षको पल्ला भारी हुने भन्दै संस्तापन पक्ष अहिले तत्काल महाधिवशेनमा जान तयार छैन।